Ihe a ga - ahụ n’obodo Oxford | Akụkọ Njem
Ihe ị ga-ahụ na obodo Oxford
Susana Garcia | | Obodo, England
Oxford bụ obodo ama ama Karịsịa maka mahadum ya, mana nke ahụ nwere ike ịbụ nleta na-adọrọ mmasị. Ọ bụrụ na anyị na-arahụ London, anyị nwere ike mgbe niile jidere a ụgbọ okporo ígwè na iru a mara mma obodo na a awa njem, mfe. N'ime ya anyị nwere ike ịhụ ebe dị jụụ na kpochapụ karịa London n'onwe ya, nwere akụkụ ụfọdụ na-adọrọ mmasị.
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọbịa adịghị arara ihe karịrị otu ụbọchị nke gaa na oxford, ọ bụ ezie na ị nwekwara ike ịnụ ụtọ ụbọchị ole na ole iji hụ ịdị jụụ dị ukwuu iji hụ ihe niile. Anyị ga-enye gị ndepụta nke ebe ị nwere ike ịhụ na obodo Bekee a ma ọ bụrụ na ị kpebiri ịhapụ London iji hụ ebe ndị dị nso.
1 Obí eze Blenheim
2 Christlọ Akwụkwọ Christ Church
3 Bridge nke rie ude
4 Ọ́bá Akwụkwọ Bodleian
5 Hamzọ Thames
6 Chọọchị Mary
7 Ogige Botanic Oxford
Obí eze Blenheim
El Obí eze Blenheim Ọ dị na Woodstock, dịdebere Oxford. Ọ bụ ebe obibi nke Dukes nke Marlborough. Ebube ya malitere na narị afọ nke XNUMX ma nwee ụdị ejiji Baroque nke Bekee. N'ime ụlọ eze ị nwere ike ịme njem nlegharị anya dị ukwuu, mana ọ bụkwa ebe a na-eme ihe omume. Emere nkuzi foto, egwu egwu ma ọ bụ egwuregwu cricket na ubi ya sara mbara. N'ulo eze a, ha edekọwokwa ihe nkiri site na fim 'Harry Potter na Order nke Phoenix', yabụ ọ bụ akụkụ nke ụzọ onye ahụ si United Kingdom.
Christlọ Akwụkwọ Christ Church
N’obodo Oxford enwere ọtụtụ ndị akpọrọ kọleji, ebe ọ bụ nnukwu obodo mahadum. Otu n'ime kọleji ọtụtụ ndị njem nleta na-eleta bụ Christlọ Akwụkwọ Christ Church, nke ụlọ uka ya bụ katidral nke obodo ahụ. N'agbanyeghị etu ebe ahụ si maa mma na mgbe ochie, nke bụ eziokwu bụ na ihe na-adọta ọtụtụ ndị njem na-emetụtakwa Harry Potter. Anyị ga-ahụ n'ime ụlọ iri nri ama ama ebe ndị anwansi zutere, ebe ndị njem nleta niile chọrọ ịhụ.
Bridge nke rie ude
Ihe omuma ndi ozo nke Oxford bu Bridge nke rie ude, onye aha ya kwesiri ka o site na oyiyi nke akwa nke Doge's Palace na Venice. Ọ dị na nnukwu ebe ahụ, ọ bụkwa akwa mmiri mara mma, agbanyeghị na nke a enweghị gondolas gbara ya gburugburu, ma ọ bụ na ọ maghị mma dị ka nke dị na Venice. N’aka nke ọzọ, n’okpuru akwa mmiri ahụ ka ị ga-ahụ otu saịn bọọdụ nke na-egosi ntụzịaka nke ụlọ ebe a na-ewu ewu nke ewu ewu, nke ụzọ dị warara ruru. Ga-abata n'ogige ebe ebe a dị, nke ụmụ akwụkwọ na-agakarị.
Ọ́bá Akwụkwọ Bodleian
Ọ nwere ike ghara efu, na a mahadum mahadum dika Oxford, na nleta na ụfọdụ ama n'ọbá akwụkwọ. Nke a bụ ọba akwụkwọ nyocha kacha mkpa na mahadum. Ọ bụ otu n'ime ndị kacha ochie na Europe na nke abụọ kachasị na Great Britain, mgbe British Library dị na London. Ọ bụrụ na anyị bụ ndị Fans nke JRR Tolkien anyị kwesịrị ịma na ọ bụ nwa akwụkwọ na prọfesọ na Oxford nakwa na ọ nọrọ ogologo oge n'ọbá akwụkwọ a. Ọzọkwa, n'ime ya bụ akwụkwọ 'Red Book of Hergest', nke kpaliri mmụọ ya ime ka ọ bụrụ 'Lord of the Rings'. Tupu ịbanye, ma ọ bụrụ na ịnọtụbeghị na ya, ị ga-a toụ iyi nke ị kwere nkwa ịgbaso iwu na imebi ihe ọ bụla na ya. Na-eso Harry Potter na-aga Oxford, ha eserekwa ụfọdụ ihe nkiri ahụ n'ọbá akwụkwọ a.
Ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ime obere mmega ahụ mgbe ọtụtụ ụlọ akụkọ ihe mere eme, ọba akwụkwọ na mahadum, anyị nwere Hamzọ Thames. Ebe ị ga-aga mkpagharị ma mee obere egwuregwu, site n'ịgba ọsọ na ịgba ịnyịnya ígwè ma ọ bụ ịga ije obere. Ọ bụ ụzọ nke emepụtara n'akụkụ Osimiri Thames ma ụzọ ya gafere Oxford, yabụ anyị nwere ike iji ohere ịnụ ụtọ ikuku ọhụrụ.
La Chọọchị St Mary College Ọ bụ otu n'ime ndị kasị ibu n'obodo ahụ, ọ bụkwa n'ezie ụlọ mara mma nke kwesịrị ileta. Akụkụ ya kachasị ochie taa bụ ụlọ elu, nke malitere na 1270, ọ bụ ezie na e nwere akụkụ ya nke agbakwunyere mgbe e mesịrị, dị ka spire na pinnacle na gargoyles. Enwere ike ileta ụlọ ụka a, jiri akụkụ mara mma n'ime ya, yana ụlọ elu ahụ, nke anyị nwere ike isi nwee nnukwu echiche nke obodo ahụ. N’obodo ọ bụla enwere ebe anyị nwere ịrị ịrị elu iji lelee ya site n’elu.
Ogige Botanic Oxford
N’ime obodo ukwu nile nke England anyi nwere ike ihu ubi buru ibu nke n’akpali anyi igha ije ma zuru ike. Nke a na ubi malitere dị ka a ọgwụ osisi ubi ma taa o nwere otu ụdị osisi dị iche iche dị iche iche n'ụwa. Ọ bụrụ na anyị amaghị ihe ọ bụla gbasara osisi, anyị nwere ike ịgagharị na ya mgbe niile ma nwee ọmarịcha ala mara mma ọ nwere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Ihe ị ga-ahụ na obodo Oxford